WADDANI TORONTO “XILDHIBAANADA DHAAMEELAYSAN IYO XUKUUMADDA DHAGARAYSAN EE “MURDISO” |
WADDANI TORONTO “XILDHIBAANADA DHAAMEELAYSAN IYO XUKUUMADDA DHAGARAYSAN EE “MURDISO”
Toronto(GNN)Laanta Xisbiga Waddani ee Toronto iyo Nawaaxigeeda ayaa cambaareeyay habkii guddoomiye xigeenka koowaad ee wakiillada Somaliland, Mr Baashe iskugu dayay inuu shir guddoomiye golaha xilli Cirro barbar fadhiyay. waxay sheegeen in arrintaasi ahayd inqilaab dhicisoobay, waxaanay bogaadiyeen guddoomiye Cirro oo ay ku tilmaameen inuu sharciga ku taagnaa.
“Guddoomiyaha, Guddiga ,Xubnaha iyo dhamaan taageeryassha xisbigga WADDANI ee Toronto iyo nawaaxigeedu waxay si buuxda u canbaaraynayaan inqilaabka dhicisoobay ee laga soo maleegay Madxatooyadda. Waxa lasoo abaabulay mu’aamarad dhagaraysan oo loogo tallo galay in lagu dumiyo Golaha Wakiilada, laguna xalaalaysto boobka iyo dhaxal wareejinta haamaha shidaalka iyo hantida qaranka . Waxa lasoo adeegsaday xildhibaano dhaameelaysan oo jeebka booli qaran iyo lacag xaaraan ah loogu shubay.
Waxaanu hanbalyo iyo bogaadin mudan Guddoomiye Cirro oo sharciga iyo xeer hosaadka cuskaday iyo xildhibaanadii sida geesinmada leh u difaacay uu ugu horeeyo Xildhibaan Ayaanle. Waxaanu shacbiga Somaliland ee sharafta iyo karamadda mudan u soo jeedinaynaa inay difaac adag u galaan ilaalinta handtida ummadda, taageero buuxdna siiyan Guddoomiyaha iyo xildhibaanda xaaraan diidka ah.”